HORDHACA: Cope del Rey Barcelona vs Sevilla – Gool FM
HORDHACA: Cope del Rey Barcelona vs Sevilla
CR Shariif April 21, 2018
( Spain) 21 April 2018. Kooxda Barcelona ayaa la ciyaareysa dhigooda Sevilla finaalka Copa del Rey oo ka dhaci doona garoonka Wanda Metropolitano xili naadiga Ernesto Valverde ee hami ka leedahay ku guuleysiga labada tartanka oo gudaha Spain.
Barca ayaa hogaanka u heysa horyaalka La liga waxeyna u baahan yihiin hal guul todobaadka dambe kulanka ay ciyaari doonto si ay u xaqiijiso hanashada horyaalka.
Tartanka: Waa finalka Cope del Rey
Saacada: 10:30 xiliga geeska Africa
Garsooraha: Jesus Gil Manzano
Rakitic ayaa kasoo laabtay jab farta ah waxaana laga ayaa inuu dhexda ku wehliyo cayaartoyda Busquets, Paulinho iyo Andres Iniesta.
Macalinka Barcelona ayaa nasiyay qaar kamid ah xiddigihiisa muhiimka kulankii talaadada ay la ciyaareen dhigooda Celta Vigo, waaxana dib safka ugu soo laabanaya Pique, Umtiti, Lionel Messi iyo weliba Alba.
Dhanka kooxda Sevilla laacibka Muriel ayaa suuragala inuu weerarka kusoo laabto isagoo caawin ka heli doona caraayahnada Sarabia, Joaquin Correa iyo Franco Vazquez.
Ever Banega, oo xagaagan ku jira qaab ciyaareed wanaagsan ayaa qadka dhexe kala ciyaari doona Steven N’Zonzi.
Labada koox ayaa horay u wada ciyaaray xagaagan kulamada horyaalka. Ciyaartii u dambeysay ayaa ku dhamaatay 2-2 tasoo dhacday horaantii bisha March, halka dheesha kale ay 2-1 ku badisay kooxda Barcelona kulan lagu ciyaaray garoonka Camp Nou bishii November ee sanadkii hore.
Naadiga Sevilla ayaa qabaan u ah kooxda Catalonia sanadihii lasoo dhaafay iyagoo aan guul ka gaarin kulamadii u dambeyay. Waxaana la garaacay shan kulan midna bar baro ayey la gashay lixdii ciyaar ee lasoo dhaafay.
Barcelona waa kooxda tirade ugu badan ku guuleysatay Copa del Rey , iyagoo qaaday 29 jeer tan iyo markii ugu horeysay oo ay koobkan qaadan sanad ciyaareedkii 1909-1910 . sido kale waa tan ugu hanashada badan tartankaan 7-dii sano ee u dambeysay waxeeyna qaaday shan mar.
Safka Macquulka ah ee labada koox.
HORDHACA: FA CUP Manchester united vs Tottenham